Indawo entle ebekwe kwifama yamahashe
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHolly
Amagumbi okulala amathathu amatsha amagumbi amabini okuhlambela anekhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlala. I-Apartment ikwifama yamahashe enoxolo kakhulu embindini wepaki entle yolondolozo. Sineendlela ezininzi zokuhamba intaba kunye nomlambo wokuloba kunye nokuqubha. Sinendawo yokucima amalahle yokuqhola kunye negumbi lomlilo elinezitulo zokuphumla kumlilo wenkampu. Le yindawo ezolileyo yokuqhawula kwizixhobo zobuchwepheshe kwaye uphinde uqhagamshelane nosapho kunye nabahlobo. AYIYONDAWO YETHEKO LE! ABANINI BAHLALA KWIPROPATI
Iindwendwe zamkelekile ukujonga iindlela kwipaki yabucala ejikeleze indawo yethu. Ukuba uzimisele ukuhamba umlambo kunika ithuba lokuloba, ukuqubha kunye nokuhamba ngephenyane. Ukuba awukuthandi ukuhamba intaba kusekho intaphane yendalo onokuyibona ukusuka ekubukeleni amahashe kunye nexhama endle ukuya ekubukeleni iintaka kwiveranda engaphambili! Sinikezela ngokukhwela amahashe kwifama yethu ngentlawulo eyongezelelweyo. Nceda ubuze umninimzi ngolwazi olungakumbi. Sikwanayo ne-charcoal grill yokuqhola (nceda uze neyakho ilahle) kunye nequla lomlilo kunye nezitulo zokuphumla malunga nomlilo wenkampu. (Zisa iinkuni zakho okanye uzive ukhululekile ukuba uzifumanele ezakho ehlathini kwipropati)
I-TV ene-I-Fire TV
4.81 · Izimvo eziyi-52
Indawo yethu ijikelezwe yipaki yabucala. Ukuhamba ngeenyawo nokuloba kuyafumaneka. Sifumaneka kwimizuzu nje ukusuka kwiFama yePond View. Indawo yegalufa eGrey kunye nendawo yokutyela ikwimizuzu elishumi kude. Simi 15 min kude rock state park, Geneva fama ibala yegalufa kunye yokutyela. Idama elihle lamakhwenkwe lihle lemizuzu engama-20 ukuqhuba ngokuloba kunye nokuhamba ngephenyane. I-Loch raven reservoir kunye nepaki yi-30 min drive. I-Inverness brewery, isebe eliwayo, kunye nefama yesileyiti zonke zingaphantsi kwe-30 min drive.
Hello I’m a wife and mother of three! I own and operate our family horse farm and enjoy spending time with my family
Sihlala kwipropathi kwaye siyafumaneka 24/7 ukuba kukho nantoni na efunekayo